Chinese Yiling ọgwụ bụ ọkwa kachasị elu nke China nzuzo ụlọ ọgwụ nke omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ. The ike ọkachamara otu nke ụlọ ọgwụ a na-ekewet nke 29 academicians nke Chinese Academy of Sciences na doctorate na esenidụt alaghachi ọkachamara. The Nchikota Chinese na Western ọgwụ nwere pụrụ iche ọgwụgwọ ụzọ na ọgwụgwọ mmetụta maka ọgwụgwọ nke dị iche iche nkịtị ọrịa, ala ala ọrịa na oké ọrịa.
Karịsịa isi specialties nke China na Hebei Province, dị ka muscle atrophy ngalaba, rheumatic ọrịa ngalaba, ọrịa shuga ngalaba, nephrotic ngalaba, akpụ ngalaba na ndị ọzọ na ngalaba, ọgwụgwọ nke ọkpụkpụ azụ muscular atrophy, moto ụdị ọrịa akwara, scleroderma, fibromyalgia, rheumatism, ọrịa shuga, akụrụ ọrịa, na ụdị nile nke cancer na ọrịa ndị ọzọ na-doro anya.
Irè ọgwụgwọ na enyemaka nke ndị mba ọzọ ọrịa si karịa 20 mba na mpaghara na ụwa. N'ihi na ọrịa ọgwụgwọ, biko ahapụ anyị ozi ma ọ bụ kpọtụrụ na ọkachamara.